I-Cruz Reader kunye neCruz yeCwecwe leThebhulethi ezimbini ze-intshi ezingama-7 ziyathengiswa | I-Androidsis
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sibone indlela entsha Icwecwe elibizwa umnqamlezo kwaye yaphuhliswa yinkampani egama lingu IiMicros zeVelocity. Nangona ngelo xesha ekuphela kwento eyenziweyo yayikukubonakaliswa kwayo, kwabhengezwa ukuba izakufumaneka ngasekupheleni kwehlobo kwaye ngexabiso elinokuba malunga ne-300 yeedola.
Siqala ihlobo kodwa ukufika kwesi sixhobo sele kunokubonakala kwaye kungene engena Baye bapapasha ividiyo yayo isebenza. Esi sixhobo, esiboniswa okokuqala njengesidla, sinokubona ukuba amandla aso abanzi kangakanani kwaye ngokwenyani singasisebenzisa xa sikhangela iwebhu, imidlalo, ukufunda, ukusebenzisa usetyenziso, njl.
Ukuba siya kwiwebhusayithi yomenzi, sibona ukuba into eboniswe njengesixhobo esinye iba ziimodeli ezimbini ezahlukeneyo ezinamandla ahlukeneyo kunye neempawu zobuchwephesha.
Umnqamlezo Reader nge 7 intshi screen resistive kunye nesisombululo seepikseli ezingama-800 × 600, i-256Mb ye-RAM kunye ne-256Mb yokugcina yangaphakathi enokwandiswa ngekhadi le-SD. Ukuxhumeka kwe-Wifi 802.11 b / g, isantya kwaye iyahambelana neefayile ezinje nge-ePub, PDF, TXT. Ukongeza, idokodo lifakiwe kwixabiso le- $ 199,99. Ngokomvelisi, ibhetri isinika ukuzimela ngaphezulu kweeyure ezingama-6 ekufundeni.
Icwecwe lomnqamlezo ngescreen se-7-intshi kunye nesisombululo sama-pixels angama-800 × 480 kodwa nge uhlobo capacitive. Imemori ye-512 Mb ye-RAM kunye ne-4 Gb yokugcina kwangaphakathi ikwandiswa ngamakhadi amancinci e-SD. Ukuxhumeka kwe-Wifi 802.11 b / g / n, i-accelerometer kunye nebhetri ngaphezulu kweeyure ezingama-6 kumdlalo wevidiyo. Ixabiso layo, $ 299,99 kwaye kule meko idokodo alifakwanga kwixabiso.
Akukho meko ichaziweyo Uhlobo lwe-android ifakiwe kodwa ukuba sibona emifanekisweni ezinye zezicelo zikaGoogle zifakiwe. Azikathengiswa okwangoku kodwa ziya kubhengezwa kungekudala, azibonakali njengenye indlela embi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-Cruz Reader kunye neCruz yeThebhulethi ezimbini ze-Android 7 intshi ngokuthengisa
INGABE INAYO IKHAMERA ??
SUKU. kukusilela kweli cwecwe
sergio fonseca sitsho
Ndinayo enye ezandleni zam umnqamlezo wokufunda «/» iza ne-Android 2.0, ukuchukumisa kuyinto encinci. ukucotha kancinci, ezinye izicelo ze-Android azihambelani, kwaye khange ndikwazi ukuba ine-bluthoo, endicinga ukuba ayinayo, jonga iinkcukacha zayo kwaye kubonakala ngathi ayizisi. Kodwa njengoko sisitsho eNicaragua, yithebhulethi ekhupha iinzipho, iiyure ezininzi zokuzonwabisa kunye ne-intanethi ...
Phendula kwi-sergio fonseca
Molo, intombi yam inenye yezi kwaye inenkqubo yokutshixa eyonwabisayo, kodwa ilibale ukuba ibiyintoni, ungandinceda ndazi ukuba siyivula njani …….
UAlexander Hzd sitsho
yifowuni le? '
Phendula kuAlejandro Hzd
Ndinengxaki ne-wifi, ndicime uqhagamshelo kwaye ngoku ndiyikhangela kwaye andiyifumani, ndingenza ntoni?
Molo NDINETABLE YOMNQAMLEZO KUFUNEKA NDIYILUNGISELELE KWAYE ANDIZI UKUBA BANGANDINCEDA NA.
NDINOMFUNDI WEKRUZ R103 KANYE i-VDD ayikuncedisi andiyiqondi kwaye ndingathanda ukuyilungisa kwangokunjalo xa uvula ibhokisi kwinto edlulileyo.